Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): ကချင်ကိုမုန်းသော ဗမာအချို့ နဲ့ ဗမာစစ်တပ်အသိုင်းအဝိုင်းများသိ၇န် ဤစာကိုမဖြစ်မနေဖတ်ပါ... ပြန်လည်၍မျှဝေပေးပါ။ကျေးဇူးတင်သည်
ကချင်ကိုမုန်းသော ဗမာအချို့ နဲ့ ဗမာစစ်တပ်အသိုင်းအဝိုင်းများသိ၇န် ဤစာကိုမဖြစ်မနေဖတ်ပါ... ပြန်လည်၍မျှဝေပေးပါ။ကျေးဇူးတင်သည်
at 4/30/2018 04:52:00 AM
တုိုက်ပွဲတွေရပ်ဖုို့နဲ့ ထွက်ပြေးနေရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက် ကုိုယ်တတ်နုိုင်တာတစ်ခုခုနဲ့ ပါဝင်လုပ်ဆောင်ကူညီပေးဖုို့ မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ။
ဓါတ်ပုံတွေ ဗွီဒီယုိုဖုိုင်တွေကတော့ တစ်ခြားသူတွေလည်း ပလူပျံနေအောင် တင်နေကြပြီးဖြစ်တာမုို့ ထပ်မတင်လုိုတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ ကချင်ဒေသက တုိုက်ပွဲတွေနဲ့ ထွက်ပြေးနေရတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေအတွက် ကုိုယ်နဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်နေတဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်ကသူများကုို မေတ္တာရပ်ခံချင်တာလေးကုိုတော့ ရေးတင်ပါရစေ။
၁။ အခုလောလောလတ်လတ် တိမ်းရှောင်ထွက်ပြေးနေရသူတွေအားလုံးဟာ အပြစ်မဲ့အရပ်သားပြည်သူတွေပါ။ သူတုို့မွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ သူတုို့ရဲ.မူရင်းနေရပ်ဒေသမှာ သူတုို့ဖာသာအေးအေးချမ်းချမ်း လုပ်ကုိုင်ရှာဖွေစားသောက်နေသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ KIA က NCA လက်မှတ်ထုိုးခြင်း၊ မထုိုးခြင်းဆုိုတာ သူတုို့နဲ့လုံးဝမသက်ဆုိုင်သလုို သူတုို့တတ်နုိုင်တဲ့အရာလည်း လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ အခုလုိုဒုက္ခတွေမခံစားချင်ရင် KIA ကို NCA လက်မှတ်ထုိုးခုိုင်းလုိုက်ပေါ့ဆုိုတဲ့ ပြောဆုိုချက်တွေဟာ နင့်မမိရင် နင့်အမေကုိုသတ်ဆုိုတာလုိုမျိုး မဆီမဆုိုင်လက်ပံသားဓါးနဲ့ချိုင်နေတာသက်သက်ပါ။ KIA က NCA လက်မှတ်မထုိုးတုိုင်း ကချင်လူမျိုးမှန်သမျှကုို စစ်တပ်က ပစ်မှတ်ထားတုိုက်ခုိုက်နေတာကုို မျက်စိမှတ်လျစ်လျူရှုပြီး ခွင့်ပြုထားခြင်းဟာလည်း အရပ်သားပြည်သူတွေကုို သတ်ဖြတ်ခံနေရတာကုို မျက်နှာလွဲခဲပစ်ရာရောက်တာမုို့ စစ်တပ်ကစစ်ရာဇဝတ်မှုကျုးလွန်နေတာကုို သွယ်ဝုိုက်၍ အားပေးကူညီရာကျပါတယ်။
၃။ ပြည်သူ့အခွန်ဘဏ္ဍာနဲ့ ပြည်သူ့လစာစား အစုိုးရတစ်ရပ်အနေနဲ့ အခွန်ထမ်းပြည်သူတွေရဲ. အသက်အုိုးအိမ်စည်းစိမ်ကုို အကာအကွယ်ပေးရမှာဟာ မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေက ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ ပြည်သူ့အစုိုးရအဖြစ် အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်နေသူ လူကြီးမင်းများရဲ.သမုိုင်းပေးတာဝန်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြို.ပေါ်နေဗမာလူမျိုးတွေရဲ.မဲတွေနဲ့ပဲ ရှင်တုို့အစုိုးရဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ အစုိုးရတစ်ရပ်ဖွဲ့စည်းနုိုင်အောင် လူကုိုမကြည့်ပဲ ပါတီကုိုသာ မဲပေးကြပါဆုိုတဲ့ အပြောင်းအလဲကုိုဆောင်ကြဉ်းပေးပါ့မယ်ဆုိုတဲ့ ကတိစကားကုို ယုံကြည်ပြီး တောနေအုံကြားမကျန်တုိုင်းရင်းသားတွေအများစုဟာ ကုိုယ့်လူမျိုး၊ ကုိုယ့်ပါတီကုိုတောင် မဲမထည့်ပဲ အစုိုးရဖွဲ့နုိုင်ဖုို့အရေး မျှော်တွေးပြီး အသည်းကြားက မဲတစ်ပြားကုိုယ်စီကုို ထည့်သွင်းပါဝင်ခဲ့ကြတယ်ဆုိုတာလဲ မမေ့ကြပါနဲ့။
၄။ ကချင်ပြည်နယ်၊ ကချင်လူမျိုးတွေဟာ ဘယ်ကမှကျူးကျော်ခုိုးဝင်လာကြသူတွေမဟုတ်ဘူးဆုိုတာ သမုိုင်းသင်ဖူးသူတုိုင်းသိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ကုိုလုိုနီနယ်ချဲ့လက်အောက်မရောက်ခင်ကတည်းက ကုိုယ့်နယ်မြေ၊ ကုိုယ့်ပုိုင်နက်၊ ကုိုယ်ပုိုင်အုပ်ချုပ်မှု၊ ကုိုယ်ပုိုင်ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာတွေရှိပြီး ကုိုယ့်သမုိုင်းနဲ့ကုိုယ် နေလာခဲ့ကြတဲ့ တုိုင်းရင်းသားလူမျိုးစစ်စစ်တွေပါ။ ပြည်ထောင်စုဆုိုပြီး လွတ်လပ်ရေးအတူတူယူကြရအောင်လုို့ ကချင်ပြည်နယ်အထိလာရောက်ပြောဆုိုစည်းရုံးခဲ့တဲ့ ဗမာခေါင်းဆောင်တွေရဲ. ကုိုယ့်နယ်မြေကုို ကုိုယ်ပုိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့ ကုိုယ့်ကြမ္မာကုိုယ်ဖန်တီးခွင့်ကုို ရစေပါ့မယ်ဆုိုတဲ့ ကတိစကားကုို ရုိုးသားစွာယုံကြည်လက်ခံပြီး ပင်လုံစာချုပ်မှာ ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထုိုးခဲ့သူတွေ၊ ဒီကနေ့အထိလည်း ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနုိုင်ငံတော်ဆုိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ လွတ်လပ်ရေးရကတည်းက တရားဝင်တုိုင်းရင်းသားများအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံရပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲနေထုိုင်လာကြသူများလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
၅။ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနဲ့ ရင်ကြားစေ့ရေးကုို တကယ်ပဲရှေ.တန်းတင်စဉ်းစားတယ်ဆုိုရင် သမုိုင်းအဆက်ဆက်အတူနေထုိုင်ခဲ့ကြတဲ့ တုိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုတွေ ခံနေရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကုိုလည်း ငဲ့ညှာစာနာရှေ.တန်းတင်စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ဒီတုိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ရင်ကြားမစေ့နုိုင်သမျှကာလပတ်လုံး ဘယ်သောအခါမှ နုိုင်ငံငြိမ်းချမ်းဖုို့ဆုိုတာ ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါ။ မြို.ပေါ်ကလူတွေအချင်းချင်းချည်း ရင်ကြားစေ့ဖုို့ ကြိုးစားမနေကြပါနဲ့လုို့။
၆။ ဒီကနေ့အထိ ကချင်လူမျိုးများဟာ ပြည်မကုိုကျုးကျော်ဝင်ရောက်ပြီး လက်နက်အားကုိုး အကြမ်းဖက်တုိုက်ခုိုက်ခဲ့တယ်ဆုိုတာ သမုိုင်းမှာလုံးဝမရှိခဲ့ပါဘူး။ အခုအချိန်အထိ ကုိုယ့်ရပ်ရွာကုို လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တုိုက်ခုိုက်ခံရလုို့ ရွာကထွက်ပြေးရတဲ့ ပြည်သူတွေဟာ မိမိနုိုင်ငံ နယ်နိမိတ်အတွင်းမှာပဲ ကျွဲနှစ်ကောင်ခတ်တဲ့ကြားက မြေဇာပင်တွေလုို တောထဲမှာ ပိတ်မိနေကြတာပါ။ အစုိုးရအနေနဲ့ လက်လှမ်းမမီနုိုင်တဲ့ ဘယ်နုိုင်ငံ၊ ဘယ်နယ်စပ်ကုိုမှ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားကြတာမဟုတ်ဘူးနော်။ ဒီစစ်ပြေးလာသူတွေကုို ကူညီဖုို့အတွက် ဘယ်နုိုင်ငံ၊ ဘယ်အစုိုးရနဲ့မှလည်း ညှိနှိုင်းတုိုင်ပင်ဆွေးနွေးစရာ မလုိုတာမုို့ ဒီလောက်အချိန်ကြာနေတာဟာ အဓိပ္ဗါယ်မရှိပါဘူး။ လက်ရှိအစုိုးရရဲ.စီမံအုပ်ချုပ်ပုိုင်တဲ့ နယ်နိမိတ်အတွင်းထဲမှာပဲ အတိဒုက္ခရောက်နေနေကြရတဲ့ ကုိုယ့်တုိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေရဲ. ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနဲ့ အခြေခံစားဝတ်နေရေးကုို အခုလုို ရက် ၂၀ နီးပါးကြာတဲ့အထိဘာမှထိရောက်တဲ့ တာဝန်ယူဖြေရှင်းလုပ်ဆောင်ချက်တွေ မရှိသေးဘူးဆုိုတာ တဆိတ်တော့လွန်လွန်းတယ်လုို့ ကျွန်မကပြောရင် တရားတယ်လုို့ ထင်ပါတယ်။ ကျွန်မမဲထည့်ထားတဲ့အစုိုးရမုို့ ကျွန်မမှာ ပြောခွင့်ရှိတယ်လုို့လည်း ထင်ပါတယ်။
၇။ ရှည်ရှည်ဝေးဝေးတွေ နိဒါန်းချီရေးနေရတာဟာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့ကတည်းက စခဲ့တဲ့ ၇ နှစ်မကြာခင်ပြည့်တော့မယ့် တစ်ကျော့ပြန်တုိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာ အစုိုးရစစ်တပ်က လေကြောင်းကရော မြေပြင်ကနေပါ အင်အားအလွန်ကြီးမားတဲ့အမြှောက်တွေ၊ လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအများအပြားနေထုိုင်တဲ့ အရပ်သားလူနေကျေးရွာတွေ၊ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေခုိုလှုံနေရတဲ့ ယာယီစခန်းရှိရာနေရာတွေကုို တမင်ပစ်မှတ်ထားတုိုက်ခုိုက်နေတာတွေနဲ့ စစ်ဘေးရှောင်လူဦးရေတစ်သိန်းကျော်ရဲ. အခြေခံလုိုအပ်ချက်တွေကုို လျစ်လျူရှုထောက်ပံ့ကူညီမှု မပေးတာတွေဟာ ကချင်လူမျိုးတွေအပေါ် မုန်းတီးတုိုက်ခုိုက်မှု၊ ကချင်ကလေးငယ်တွေနဲ့ လူငယ်တွေကုို အနာဂတ်မှာ လူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်ခွင့်မရအောင် လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်ကြိုးပမ်းမှုအဖြစ် သက်သေအထောက်အထားတွေပဲလုို့ သတ်မှတ်လုို့ရကြောင်း ထောက်ပြပြောချင်လုို့ပါ။
၈။ လက်နက်ကုိုင်အချင်းချင်းမကျေနပ်ရင် လက်နက်ကုိုင်ထားသူအချင်းချင်းသာ တုိုက်ခုိုက်ကြပါ။ ပြည်သူတွေကုို မထိပါနဲ့။ တုိုင်းရင်းသားတွေချည်း ခံနေရတာမဟုတ်ပါ။ ငါတုို့ဗမာတွေလည်း ခံနေရတာပဲလုို့ အပေါ်ယံတွေးပြီး ညီမျှခြင်းလာမချကြပါနဲ့။ ဗမာတွေအိမ်ကုို ဘယ်စစ်တပ်ကမှ မီးလာမရှို.ပါဘူး။ ဘယ်ဗမာမှလည်း စစ်တပ်ကုိုကြောက်လုို့ အုိုးအိမ်စွန့်ခွာ တောထဲကုိုထွက်ပြေးစရာမလုိုပါဘူး။ သိသာမြင်သာတဲ့ ကွဲပြားစွာ ခွဲခြားခံရမှုတွေကုို မျက်စိစုံမှတ်ပြီး မငြင်းခုန်ကြပါနဲ့။ ပုိုပုိုပြီးသာ အမုန်းပွားစရာတွေဖြစ်မှာမုို့လုို့ပါ။ ကျွန်မအဖေဗမာကမွေးတာပါ။ ဘလုိုင်းကြီးဘယ်လူမျိုးကုိုမှ မုန်းလုို့ပြောနေတာမဟုတ်ရပါ။
၉။ ပုံမှန်လာနေရမယ့် လျှပ်စစ်မီး တစ်နေကုန်ပျက်လုို့ ဒေါသထွက်သလား။ လျှပ်စစ်မီးမရှိပဲ တစ်သက်လုံးနေခဲ့ရတဲ့ တုိုင်းရင်းသားဒေသတွေကုို စာနာပါ။ မြို.ပေါ်မှာ ရေ ၃ ရက်လောက်ပြတ်လုို့ ဆဲချင်သလား။ နေ့တုိုင်းသောက်ဖုို့ သုံးဖုို့ရေကုို မုိုင်နဲ့ချီဝေးတဲ့နေရာတွေမှာ သွားခပ်နေရဆဲ တုိုင်းရင်းသားတွေကုိုလည်း သတိရပေးပါ။ လမ်းတွေပိတ်ပြီး ဘတ်စ်ကားကျပ်လုို့ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သလား။ အခုအချိန်အထိ ကုိုယ့်ခြေထောက်ကုိုယ်အားကုိုးပြီး သေရေးရှင်ရေးတောင် ပုခက်နဲ့ အနီးဆုံးဆေးရုံကုို အချိန်မှီအရောက်မပုို့နုိုင်လုို့ သေကြေပျက်စီးခဲ့ရတဲ့ အသက်ပေါင်းများစွာကုိုလည်း ငဲ့ကြပါ။
၁၀။ တောမှာနေလုို့ မြို.မှာနေလုို့ဆုိုပြီး ခွဲခြားမပြောကြပါနဲ့။ တောမှာနေသူတွေကုိုမုို့ အစုိုးရကအခွန်လျှော့မကောက်ထားပါ။ တုိုင်းရင်းသားတွေမုို့ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးထားရင်တော့လည်း ဒုက္ခခံရရင်တောင် ခံသာသေးတာပေါ့နော့။ အစုိုးရကုိုအခက်တွေ့အောင် အပြစ်မတင်ကြပါနဲ့။ မဝေဖန်မပြောဆုိုကြပါနဲ့လုို့လည်း ကျွန်မတုို့ကုိုမဆဲကြပါနဲ့။ ကုိုယ့်အစုိုးရကုိုမှ ကုိုယ်မပြောရရင် ကျွန်မတုို့က ဘယ်သူ့ကုို တုိုင်တည်ပြောရမှာပါတဲ့တုန်း။ ဒီအစုိုးရကလွဲရင် ကျွန်မတုို့မှာ တစ်ခြားဘယ်သူ့ကုိုသွားအားကုိုးရမှာမုို့လုို့တုန်း။ အားကုိုးလုို့ရမယ်ထင်လုို့ အာဏာရအောင် ကျွန်မတုို့အားလုံး ဝုိုင်းဝန်းပံ့ပုိုးခဲ့ကြတာပေါ့။ အွန်လုိုင်းပေါ်ကချည်း လေပေါထောက်ပြမနေကြနဲ့ အစုိုးရကုိုလည်း နားလည်ပေးကြဦးလုို့ မပြောပါနဲ့။ ကျွန်မတုို့တတ်နုိုင်တဲ့ဘက်ကလည်း အစုိုးရကုို နုိုင်တဲ့ဝန်ထမ်းကူလျက်ရှိပါတယ်။ ဒီမုိုကရေစီ အစုိုးရမှန်ရင် အပြစ်တင်ဝေဖန်မှုတွေကုိုလည်း ကြိုဆုိုလက်ခံနုိုင်ရပါမယ်။
ကျွန်မရေးတာတွေကုို သဘောမတူရင် သူငယ်ချင်းစာရင်းကဖျက်သွားလုိုက်ပါ။ တကယ်တော့ ဒီထက်တောင်ရေးလုို့ရရင် ရေးချင်တာပါ။ အချိန်တန်ရင် အိမ်ပြန်ဝင်ခွင့်မရမှာစုိုးလုို့ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနဲ့ ဒီလောက်ပဲရေးပါရစေ။ ကျွန်မလူမျိုးတွေရဲ. ကြုံနေရတဲ့ဒုက္ခတွေကုို မခံစားနုိုင်တော့ဘူး။ အသက် ၁၁၄ နှစ်အရွယ်အဖွားလည်း မနေရဘူး။ လောလောလတ်လတ် ကလေးမီးဖွားပြီး ချက်ကြိုးတောင်မပြတ်တပြတ်နဲ့ အမေလည်းကလေးပုိုက်ပြီးလည်း ပြေးနေရတယ်။ သေနတ်သံနဲ့ ဗုန်းဆံတွေကြား အသက်လုပြေးလာရသူတွေကို သေနတ်ပြောင်းနဲ့တေ့ထားသေးတယ်။ အကူအညီပေးဖုို့ အရောက်သွားတဲ့သူတွေကုို သွားခွင့်၊ ကူခွင့်မပေးဘူး။ ခုိုးပြီးထွက်ပြေးဖုို့ကလည်း ပတ်ပတ်လည်က မြေမြုပ်မုိုင်းနင်းမိမှာ ကြောက်နေရသေးတယ်။ လက်ပုိုက်ကြည့်နေနုိုင်သူတွေကုိုရော ဒီလောက်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာတောင် ကချင်လူမျိုးတွေအကုန် သေသွားမှအေးမယ်ဆုိုသူတွေကုို အံ့သြလွန်လွန်းလုို့ပါ။ ဘယ်သူ့ကုိုမှလည်း မမုန်းပါဘူး။ ကုိုယ်တတ်နုိုင်သလောက် အုတ်တစ်ချပ်သဲတစ်ပွင့် ကူညီနုိုင်တာလေးတော့ ဆန္ဒရှိရင်ဘယ်သူမဆုို ကူညီပါဝင်လုပ်ဆောင်ပေးလုို့ ရတယ်လုို့တော့ ထင်မိတာပဲလေ။
၂၀၁၈၊ ဧပြီ ၂၈
(Credit:May Sabe Phyu)